Sharmila Bhandari2YEARS AGO 1741 views
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसले विश्वभर नै संकटको अवस्था सिर्जना भएसंगै नेपाल सरकारले पनि संक्रमणको जोखिम हुन नदिन लकडाउनको घोषणा गर्यो । लकडाउन अर्थात एकान्तबास तपाई जहा हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस् र घर भित्रै बस्नुहोस् ।
लकडाउनको मारमा परेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको शिक्षा हो । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका यतिबेला घरमा छन् । यो लकडाउनसंगै धेरै अभिभावकको एउटै चिन्ता अब छोराछोरीलाई घरमा कसरी राख्ने ? म पनि एउटा अभिभावक मनमा चिन्ता उहि थियो दुई छोराछोरी अब घरमा कसरी राख्ने ? अरु दिनका विदा हुदो हो त कहिले कता कहिले कता घुमाउदा दिन बित्दथ्यो तर यसपालिको विदा फरक किसीमको भयो अभिभावक र बालबालिका दुवैका लागि । फेरि आजभोलिका बच्चा मोबाईल टेलिभिजन देखि टाढा राख्न गाह्रो । यस्तै यस्तै चिन्ता मेरा मनमा पनि थिए । आज लकडाउनको सोह्रौ दिन अर्थात सरकारले तेस्रो चरणमा आगामी बैशाख ३ सम्मका लागि लकडाउन अवधि थप गरेको छ । विदाहरु यो भन्दा पहिले नभएका होइनन् तर ति विदाहरु फरक खालका थिए । र ति विदाहरु सधै हतारमै बित्ने गर्दथे । चाडबाड आयो दौडधुप । अन्य विदा त्यस्तै त्यस्तै गरि सकिने । यो लकडाउन हामी सबैका लागि सायद नयाँ अनुभव भयो । सरकारले पहिलो दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरि लकडाउनको अवधि लम्बाउदै गयो । यो १५ दिनको एकान्तबासमा देशमा थुप्रै समस्याहरु भएका छन् । तथापी एकान्तबासमा म र मेरो परिवारले पाएको एउटा सुखद अनुभव के भने पारिवारिक माहोल निकै राम्रो भएको छ ।
लकडाउनले विभिन्न समस्याहरु महसुस गराईरहेका बेला यसका केहि सकारात्मक पक्षहरु पनि देखिए ।
सामाजिक संजालमा अधिकांशले आफ्ना परिवारसंग बस्न पाउदाको खुशि साटिरहेका छन् । धेरैले आफ्ना बालबच्चाका कला सामाजिक संजालमा पोस्ट्याएको देखिन्छ । भनिन्छ नि परिवार सुख भन्दा अर्को सुख छैन । लकडाउनले यतिबेला हामीलाई सिकाइरहेको पाठ भनेको परिवारको महत्व हो ।
सधैको दैनिकी बिहान उठ्यो छोराछारीलाई हतार हतार विद्यालय पठायो । दुइ बुढाबुढीदिनभर आ आफ्नो काममा व्यस्त । साझ घरमा सबै जना भेला भयो छोराछोरीको गृहकार्य खाना पिना बस यत्ति मै सिमीत । लाग्दथ्यो छोरा छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाएकै छु । राम्रो सुविधा दिएकै छु । तर त्यत्तिले कहाँ पुग्थ्यो र बालबालिकालाई । उनिहरुको कुरा सुनिदिने कस्लाई फुर्सद ? जिवन सधै हतारको । यो लकडाउनका बेला मैले गरेको एउटा मिठो अनुभुती अहिले म र मेरो श्रीमानले छोराछारीका लागि प्रसश्त समय दिन भ्याएका छौं ।
बालबालिका स्वभावैले सृजनात्मक हुन्छन् । तर उनिहरुको ति सृजनालाई राम्ररी समय दिन नभ्याएको अनुभुति हुने गर्दथ्यो । यसपालि भने छोराछोरीले मजाले खुलेर आफ्ना कला देखाउदै छन् । उनिहरु हामीसंग नयाँ नयाँ अनुभव साटिरहेका छन् । हामीले बच्चाहरुलाई आफुले जानेका कुराहरु देखि व्यवहारिक ज्ञानदिन भ्याएका छौ । आहा यो कस्तो रमाईलो अनुभव । भनिन्छ मानिस पढेर भन्दा परेर जान्ने हुन्छ । त्यसैले यतिबेला म जस्ता अभिभावकले जान्नु पर्ने कुरा के भने यो समयको सदुपयोग गर्दै हामीले हाम्रा बालबालिकालाई जिवन जिउने कला पनि सिकाउनु जरुरी छ । किताबी ज्ञानले मात्र मानिस पूर्ण हुन सक्दैन । त्यसैले यो समयमा हामीले हाम्रा बालबालिकालाई व्यवहारिक ज्ञान दिन सकिन्छ । ताकि यो ज्ञान उनिहरुका लागि आजिवन लाभदायी हुनेछ ।
अरुबेला विदा भयो कि मोबाइल र टेलिभिजनमा झुम्मिहाल्ने बालबालिकाको बानी व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । साना नानिहरुलाई फुर्काउदै भान्सा, करेसाबारि , लुगा धुने, भाडा माझ्ने लगायतका काम सिकाइयो भने यो ज्ञान उनिहरुका लागि जिवन निर्भाहको एउटा राम्रो सिकाई हुनेछ ।
बालबालिकाको पहिलो पाठशाला उस्को घर परिवार हो । त्यसैले उसले आफ्नो घरबाट राम्रा कुराहरु सिक्नु जरुरी छ । अरुबेला बालबालिकाले गरेका अनेक थरिका प्रश्नको जवाफ दिन नभ्याउने हामीले यसपालि भने उनिहरुका प्रश्नको जवाफ दिन मज्जाले भ्याएका छौं ।
उनिहरु प्रश्नको जवाफ पाउँदा अहो कस्तो दंग । साच्चै यो पो सुन्दर संसार । कस्तो मिठो अनुभव । बालबालिकाले संसारका सबै कुरा जान्ने गुगल जस्तै सोच्दा रहेछन् आफ्ना बाबु आमालाई । उनिहरुको हरेक प्रश्नको उत्तर हामीसंग हुनै पर्ने । उनिहरुका हरेक क्रियाकलापमा हामी सहभागी भैदिनु पर्ने ।
यो समयमा उमेर पुगेका बालबालिकालाई आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाई सिकाउदा उनिहरु आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने हुने रहेछन् ।
दिनभर सुतेर समयको बर्बादी गर्नुभन्दा यतिबेला परिवारका लागि समय दिन सकियो भने पारिवारिक मेल पनि बढेर जान सक्छ । बालबालिकालले सहि अभिभावकत्वको महसुस गर्नेछन् ।
यो लकडाउनलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लियौ र यसलाई सहि सदुपयोग गर्ने अठोट पनि गरियो । लकडाउनका बेला काम भएन भनेर बस्नेहरु घर परिवारसंग रमाउनुहोस् । सृजनात्मक बन्नुहोस, घर भान्सा करेसाबारिमा भएका कामहरु गर्नुहोस् ।
बालबालिकालाई अरुबेला सिकाउन नभ्याएका ज्ञान सिकाउनुहोस् । समय बितेको पत्तै हुने छैन ।